2 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:10 pm
MTV music အလိုရှိသူတွေအတွက်
ပြီးခဲ့တဲ့ MTV တွေကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ "120" minutes တို့၊ YO! MTV Raps တို့ "Headbanger's ball တို့ကို လိုချင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် MTV music([You must be registered and logged in to see this link.] ကနေ တင်ဆက်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် ရယူနိုင်ကြပါလ်ိမ့်မယ်။ အများဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ MTV ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် MTV တွေအပြင် Vintage Video တို့၊ Staff Picks တို့ The Shredlist တို့လို့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့
အမျိုးအစားလိုက် အင်တာနက်ကနေ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုက်ကလေးနာမည်က Face your manga လို့ အမည်ရပါတယ် ...
မိမိမျက်နှာလေးနဲ့ ဆင်တူကိုက်ညီမယ့်မျက်နှာလေးတွေကို အဲဆိုက်ကလေးမှာ လိုသလို ဖန်တီးပြုပြင်လို့ရတယ်
သူ့မှာ ဘယ်လို ဘယ်ပုံဖန်တီးရမယ်ဆိုတာလေးလည်း ပါတယ်
ဆိုက်လင့်ခ်လေးက ဒီမှာပါ ...
3 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:11 pm
သင်ဟာ နိုင်ငံခြားဘာသာကို လေ့လာသူဆိုရင် သီချင်းနားထောင်ရင်းလေ့လာရတာက ပုံမှန်ထက် ပိုမှတ်မိလွယ်မှာပါ။ ဒီဆိုက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့သီချင်းမြောက်မြားစွာရှိတယ်။ သီချင်းတွေရဲ့အောက်က စာတန်းထိုးပြီး မသိတဲ့ စာလုံးရှိရင် ချက်ချင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်စုထုတ်ထားနိုင်တယ် ။ သီချင်းပုံစံအပြင် စာဖတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့လည်း လေ့လာနိုင်တယ်။ မသိတဲ့စာလုံးကို အဘိဓာန်ထဲပြန်ရှာစရာမလိုဘဲ ကလစ်နှိပ်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သီချင်းတွေ စာတွေကိုလည်း upload လုပ်လို့ရပါတယ်။ သီချင်းလေးနဲ့ လေ့လာမှ ပိုမှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ [You must be registered and logged in to see this link.] က ကူညီပါလိမ့်မယ်
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ ဓာတ်ပုံတွေကို Ascii ပုံပြောင်းပေးတဲ့ဆိုဒ်ပါ။ စက်ထဲက ပုံဖြစ်ဖြစ် ၊အင်တာနက်ထဲကဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပေးလို့ရပါပြီး ပုံဆိုဒ်ကိုလည်း အကြီးအသေးကြိုက်သလို ရွှေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဆိုဒ်က နံပတ်(1)ပါ၊ (5)ကတော့ အကြီးဆုံးဆိုဒ်ပါ။၀က်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ ထူးခြားချက်က ပြောင်းပြီးပူံမှာ နဂိုအရောင်ပါလာတာပါပဲ။ ဒိပုံကို အခြားမှာ သုံးဖို့Code ထုတ်ပေးပါတယ်။ လိပ်စာက [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ
4 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:12 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] သည်
ဘာသာစကားအမြောက်အမြားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော Translator ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။
“ သင်ဘာသာပြန်ဖို့ လိုအပိလာတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဖြေရှိနေပါပြီ ဟူသော” ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မှ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဒက်ခ်ျ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှ၊ နော်ဝေ၊ ဂျပန်နှင့် တရုတ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုး
တရုတ်ဘာသာစကားမှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာစကား(9)မျိုးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မိမိသိလိုသော ဘာသာစကားကိုသာ ပြန်ဆိုရန် Text Translator ကို အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် ဖတ်လိုသော ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သည့် Web Translator ပါ ပါဝင်ပါသည်။
Web Translator လုပ်ရန်အတွက် ၀က်ဘ်ဆိုက်၏ လိပ်စာကို ရိုက်သွင်းအသုံးပြုရသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲအတွက် လေ့လာလိူုသူများအတွက် Free Practice Test များပြုလုပ်နိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။
IELTS , TOEFL စသော International ESL/EFL စာမေးပွဲများ၊ CPE,CAEFCE နှင့် PTE ကဲ့သို့သော Camebridge ESOL စာမေးပွဲများအတွက်လိုအပ်သော Reading, Writing,Listening နှင့် Vocaculary Test များကို အခမဲ့ Practive ပြုလုပ်နိုင်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင်အတန်းကို မသိရှိပါက Level test ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ အမျိုးမျိုးကို နှိုင်းယှဉ်၍ ပြသထားသည်ကိုလည်း လေ့လာနိုင်သည်။
5 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:14 pm
သင့်အကြိုက်ဆုံး သီချင်းကို ဖုန်း ring tone လုပ်ဖို့ ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မလိုပါဘူး။ [You must be registered and logged in to see this link.] မှာသီချင်းကို ring tone အဖြစ်ပြောင်းဖို့ အဆင့်သုံးဆင့်ဘဲ လိုပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စက်ထဲက ကြိုက်တဲ့သီချင်းကိုရွေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းရှိနေတဲ့ website address ကိုထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် သီချင်းထဲက အကောင်းဆုံးအပိုင်းကို ရွေးချယ် ဖြတ်တောက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ download ဆွဲရုံပါဘဲ။ ဘာရီဂျစ်စတာ၊ ဘာsoftware မှမလိုပါဘူး။ သည်ဆိုက်မှာ web ပေါ်က ring tone တွေကို ရှာဖွေနိုင်သလို လတ်တလော download ဆွဲထားတာတွေကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ Ring tone တစ်ခုကို အလွယ်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံး ရအောင်ဖန်တီးပေးမယ့် ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
6 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:14 pm
အားတဲ့အချိန်မှာ ခဏလေးမှာ ဘာသာစကား တစ်ခုလောက် သင်ဖို့ စိတ်ကူးပါသလား။ [You must be registered and logged in to see this link.] ဟာ online မှာ ဘာသာစကားအခမဲ့သင်ပေးတဲ့ ဆိုက်ပါ။ သည်ဆိုက်မှာကမ္ဘာပေါ်က ဘာသာစကားအားလုံးနီးပါးကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တဲ့အခါ ချက်တင်ပြောရင်း သင်နိုင်သလို လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ သင်ယူနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။ Register လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်အခုသုံးနိုင်တဲ့ ဘာသာစကားကို ရွေး၊ သင်ချင်တဲ့ ဘာသာစကားကို ရွေးပေးရမှာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ သင်ကြားရမှာမို့ ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်လာမှာအသေအချာပါဘဲ။
7 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:14 pm
နည်းပညာရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် လူ့မိတ်ဆွေ စာအုပ်တွေကို စာကြည့်တိုက်မှာတင်မက online ကပါဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ onlineစာအုပ်ဖတ်ချင်ပေမဲ့ စာရေးဆရာနာမည်၊စာအုပ်နာမည်မသိရင် ဘယ်မှာသွားရှာမလဲ။[You must be registered and logged in to see this link.] ကသည်လိုအခက်ကြုံနေသူတွေအတွက် online စာအုပ်လမ်းညွှန်လုပ်ပေးထားတယ်။ အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းစာအုပ်တွေရှိရာ website တွေကိုသည်မှာ စုစည်းပေးထားတာပါ။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဖတ်ချင်သလား၊သုတရသဖတ်ချင်သလား၊ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးပြီးရှာရုံပါဘဲ။ တခြားအွန်လိုင်းလမ်းညွှန်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့ လိုချင်တာ မတွေ့မချင်း ရှာနိုင်ပါသေးတယ်။ စာအုပ်ကောင်းတွေ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ သည်ဆိုက်က ကူညီပေးမှာပါ။
8 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:15 pm
Graphic Design လေ့လာချင်သူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ website ပါ။ သည်website မှာ Graphic Design အခြေခံအတွက် လစဉ်ဆောင်းပါးတွေတင်ထားပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွေမှာ ကုမ္ပဏီLogo ပြုလုပ်ပုံအခြေခံကစပြီး Website Designရေးဆွဲပုံအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ Graphic Designer တစ်ယောက်နားလည်ထားသင့်တဲ့ အရောင်တွေအကြောင်း၊ Font စာလုံးတွေ အကြောင်း၊ အနုပညာအခြေခံစည်းမျဉ်းတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ Flash, 3D တို့အကြောင်းလေ့လာနိုင်သလို Tutorialတွေလည်းရှိပါတယ်။ website address က[You must be registered and logged in to see this link.] ပါ။
9 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:16 pm
Famous Online Game website ဖြစ်ပါတယ်။
10 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:18 pm
မိမိနှစ်သက်ရာ ဓါတ်ပုံ များကို effect လုပ်နိုင်ပါသည်။
တစ်နေ့တာပင်ပန်းသမျှ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနေရသမျှ ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်ဖြေဖျောက်နိုင်ပါတယ်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်းများကို သာကစားလိုသူများအတွက် ဒီ [You must be registered and logged in to see this link.] ကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်
orisinal မှာ flash game အမျိုးပေါင်း 60 ထည့်သွင်းပေးထားပြီး mouse နဲ့ arrow key ကိုအသုံးပြုကာအလွယ်တကူကစားနိုင်ပါတယ်
ဒီgameကိုအင်တာနက်ရရှိတဲ့မည်သည့်နေရာမှာမဆိုကစားနိုင်ပြီး flash player software ကို install လုပ်ထားတော့လိုအပ်ပါတယ်
11 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:18 pm
ဒီ website လေးကတော့ ဗဟုသုတမြောက်မြားစွာကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်
မိမိသိလိသမျှမေးခွန်းများကို Ask box မှာရိုက်ထည့်မေးမြန်းနိုင်ပြီး Answer website မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Animal Life, Business & Finance, Cars & Vehicles, Entertainment & Arts, Food & Cooking, Health, Home & Garden, Science & Sport
များပါဝင်ပြီး အဲဒီအောက်မှာ မိမိသလိုလေ့လာသမျှကို လေ့လာလို့ရပါတယ်
Today in History, Today's Birthdays & word of the Day အခန်းများပါဝင်ခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဗဟုသုတလေးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်
12 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:18 pm
သင့်ဖုန်းရဲ့ ringtone ကို တခြား ဘယ်သူနဲ့မှ မတူအောင်ဖန်တီးလိုပါသလား
သည် site မှာ ဂစ်တာ၊ အော်ဂင်၊ တယော စတဲ့ တူရိယာတွေကို ကိုယ်တိုင်တီးခတ်ပြီး ဖုန်းမြည်သံ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
တီးချင်တဲ့တူရိယာကို ရွေးပြီး ကလစ်နှိပ်ပေးရုံပါပဲ
Key အနိမ့်အမြင့် ပြောင်းလို့ရသလို တူရိယာများစွာပေးထားလို့ သင်ဖန်တီးတဲ့အသံဟာ တခြားဘယ်သူနဲ့မှမတူနိုင်တော့ပါဘူး
ကြိုက်ပြီဆိုရင် play ကိုနှိပ်ပြီး download ယူနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းမြည်သံ ring tone ကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသုံးစွဲချင်သူတွေအတွက်
[You must be registered and logged in to see this link.] ကနှစ်သက်စရာလေးပါ
13 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:20 pm
ကိုယ့် Gmail ကိုကာကွယ်ဖို့
ကြော်ငြာ Spam ပို့တဲ့သူတွေဟာ သင့် email လိပ်စာကို Program အမျိုးမျိုးသုံးပြီး ရှာလေ့ရှိပါတယ်
Email လိပ်စာကို ရုပ်ပုံအဖြစ် ပြောင်းထားရင် Spam Program တွေ မရှာနိုင်တော့ပါဘူး
Email ကို ရုပ်ပုံအဖြစ် ပြောင်းပေးမှာက [You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်ပါတယ်
သည် site မှာ email address (eg. [You must be registered and logged in to see this link.]) ကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲသည်လိပ်စာကို ရုပ်ပုံအသွင်နဲ့ရရှိမှာပါ
ပုံကို စက်ထဲမှာ သိမ်းနိုင်သလို online မှာ သုံးဖို့ URL လည်းထုတ်ပေးပါတယ်
Gmail အပြင် AOL, Hotmail, MSN စတဲ့ email တွေကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်
Spam တွေရဲ့ ရန်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ သုံးကြည့်နိုင်တဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
14 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th April 2009, 3:20 pm
သင်ဟာ တိုက်ခိုက်ရေး game တွေကို ကြိုက်ရင် သည် game ကို နှစ်သက်မှာပါ
သည် game ဟာ အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ ရေတပ်နည်းဗျုဟာတွေကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ game ပါ
တကယ့်စစ်ပွဲမှာသုံးတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်တွေကို game ထဲမှာ သုံးရမှာပါ
အရင်ဆုံး Account ဆောက်ပြီးတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်အလုပ်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာ ရွေးပေးရတယ်
စသဖြင့် ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါ game ကို Download ရယူနိုင်ပါပြီ
သည်siteမှာ game အပြင် ရေတပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ screen saver တွေ Wall paper တွေ ပါရနိုင်ပါသေးတယ် လိပ်စာကတော့
[You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်ပါတယ်
15 Re: Website-Index........ [Resource] on 2nd May 2009, 7:27 am
တညျနရော : yangoon
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-04-22
ကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တော်တော်လေးကို စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်...။
မြန်မာလိုရေးထားတာဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းချက်တွေကို ရုပ်ပုံတွေနဲ့တကွ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ နားလည်နိုင်ပါတယ်...။
16 Re: Website-Index........ [Resource] on 3rd May 2009, 11:19 am
[You must be registered and logged in to see this link.] Engineering
[You must be registered and logged in to see this link.] ဆေးပညာပိုင်း
[You must be registered and logged in to see this link.] အလှအပပိုင်း
[You must be registered and logged in to see this link.] ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက်
[You must be registered and logged in to see this link.] video များအတွက်
[You must be registered and logged in to see this link.] (Download accelerator plus)
17 Re: Website-Index........ [Resource] on 3rd May 2009, 11:19 am
[You must be registered and logged in to see this link.] ( en.wikipedia.org )
[You must be registered and logged in to see this link.] (Bit Defender)
[You must be registered and logged in to see this link.] (McAfee)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Norton)
[You must be registered and logged in to see this link.] (AVG:free)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Spy Sweeper)
[You must be registered and logged in to see this link.] (AVG Anti-Spyware)
[You must be registered and logged in to see this link.] (AD-Aware SE)
18 Re: Website-Index........ [Resource] on 3rd May 2009, 11:20 am
[You must be registered and logged in to see this link.] (sg)
[You must be registered and logged in to see this link.] (wordwide)
[You must be registered and logged in to see this link.] (russia)
[You must be registered and logged in to see this link.] (House Design)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Rice Stock)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Oil Stock)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Money Exchange)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Korea Model)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Korea & Japan Model)
[You must be registered and logged in to see this link.] (Time Convert)
တကူးတကရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ N@pster
19 Re: Website-Index........ [Resource] on 3rd May 2009, 8:17 pm
ကို ET ရေကျေးဇူးအထူးပါဗျာ...
20 Re: Website-Index........ [Resource] on 3rd May 2009, 8:35 pm
လင့်ခ်တွေမှ အများကြီးပဲ... ပျော်စရာကြီး... ကို ET ရေ ကျေးဇူးအထူးပါ...
21 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 10:56 am
သြစတြေးလျ email service တစ်ခုကနေ ကျောင်းသားသုံး
America Online ရဲ့ service ဟာ အခမဲ့ အသုံးပြုသူတွေအတွက်
5GB ပမာဏပေးထားပြီး နောင်မှာ unlimited အထိတိုးမြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
acount အမျိုးမျိုး ခွဲခြားထားပြီး 2GB ကနေ 20 GB အထိ
သိုမှီးပမာဏ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ စနစ်နဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြု
တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူဟာစိတ်ချမ်းသာမှု ရစေပါမယ်လို့ ကတိပြုထားပါတယ်။
spamတွေကို ကာကွယ်ဖို့ မြင့်မားတဲ့ tools တွေကို
သုံးစွဲပြီး ပေးပို့သူနဲ့လက်ခံသူနှစ်ယောက်ကြား မှာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုမူတည်ပြီး
ယုံကြည် စိတ်ချရမှုရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကိုတောင် ရွှေးချယ်ပေးပါတယ်။
22 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:00 am
သတင်းမွှေးနေတဲ့ Email တစ်ခုပါ။
provider တစ်ခုရဲ့ လိပ်စာပါ။
သုံးစွဲနိုင်တဲ့ service တစ်ခုဖြစ်သလို user က ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီး
သဘောကျခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့အလှူငွေ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဒါနတရားဟာ
ကမ္ကာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ မဖွံ့ဖြိုး၊ မတိုးတက်သေးတဲ့ နေရာတွေအတွက်
ပန်းချီတို့နဲ့ ပက်သက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်တဲ့ “out-blaze” ရဲ့
service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကာတွန်းချစ်သူတွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြီး အမြင်တွေက်ို
ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးနဲ့ နှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ပြီး POP3 acount တွေကို
23 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:05 am
နည်းပါးပေမယ့် စာပို့ခြင်းနဲ့ လက်ခံယူခြင်းတို့မှာ အလွန်မြန်ဆန်ပြီး
မျိုးကျော်နဲ့ သုံးစွဲလို့ရတဲ့ 1GB Mail ပါ။
100 MB အထိ ပေးထားပါတယ်။
100 MB ရရှီစေပါတယ်။
ဖိုင်တွေကို လုံခြုံမှုဝှက်စာနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
အခမဲ့ကို 6MB သာ
ပေးအပ်ထားပေမယ့် တခြား IM နဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ features တွေအများအပြား ရှိနေပါတယ်။
5 GB ပေးထားပြီး
IMAP ချိတ်ဆက် ရရှိစေပါတယ်။
Mail Alert တစ်ခုပါဝင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကား အပါအ၀င် language ပေါင်း ၁၂
24 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:06 am
POP3/ IMAP တွေကို
လက်ခ့တဲ့အတွက် 16 MB သာ ပေးအပ်ထားပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Email တွေကို outlook ကနေ
တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
တင်လို့ ရသလို chat နဲ့ voip ကိုပါ ပေးအပ်ထားတဲ့ Email
Linux OS ရဲ့
အဆင်အပြင်နဲ့ အခမဲ့ service တစ်ခုပါ။
ကာလ) အဆင့်သာရှိသေးပေမယ့် online ရဲ့ e-mail သုံးစွဲသူ
3 GB ပေးထားပြီး
attachments ကိုတော့ limit နကန့်သတ်ဘူးလို့ ကြေညာထားပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုပါ။ စတင် ယူယူချင်းမှာ 250 MB ရရှိပေမယ့် invite letter
ရှာဖွေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 2GB ပမာဏအထိ ရနိုင်ပြီး ကြော်ငြာတွေကိုပါ
25 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:09 am
40 MB သုံးစွဲခွင့် ရှိပါတယ်။
သိုလှောင်မှု ပမာဏ ရရှိပါတယ်။
ကျောင်းသားများ အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေထားခဲ့တဲ့ mail တစ်ခုပါ။
Email လှလှ ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
opera browser ကို
သုံးစွဲကြသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ webmail ဟာ3MB သိုလှောင်မှုပေးပါတယ်။
အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
26 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:10 am
တစ်ခုပါ။ 1 GB သိုလှောင်ခွင့် ပေးထားပြီး provide က UK မှာ ရှိနေပါတယ်။
attachment ကို 2MB
အထိ ပေးထားတဲ့ 25MB ပမာဏ အီးမေးလ်တစ်ခုပါ။
1 GB ပမာဏ
သိုလှောင်မှုနဲ့အတူ 10 MB attachment ရရှိစေတဲ့ အိန္ဒိယ အခြေစိုက်
10 GB ပမာဏကို
စမ်းသပ်ခွင့် သုံးလပေးထားပါတယ်၊၊ အခမဲ့သမားတွေအတွက်အမှန်တကယ် သုံးစွဲနိုင်တာက
1GB/ 10 MB ဖြစ်ပါတယ်။
3.5 MB အထိ file
ချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ e-mail တစ်ခုဖြစ်ပြီး 25 MB ပမာဏ ပေးအပ်ထာပါတယ်။
3 MB သာ storage
ပေးထားပေမယ့်ပေးပို့သူ တွေအတွက်ကိုတော့ လုံခြုံရေး မြင့်မြင့်မားမား
27 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:10 am
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
15 MB ရှိပြီး
up-grade ကိုတော့ ငွေပေးဝယ်ယူရပါမယ်။
ရည်ရွယ်ပြီး ဂိမ်းတွေ ဆော့ကစားနိုင်စေဖို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ e-mail အပြန်အလှန်
များပြားတဲ့ domain ပေါင်းစုံရှိနေတဲ့ service ပါ။ yahoo ကုမ္ပဏီရဲ့အပိုင်
28 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:11 am
တို့လို Email အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ inbox အတွင်းမှာ chat/IM အသုံးပြုလို့ရအောင်
ကိုသုံးစွဲနေရင်းနဲ့ အခြားသော mail တွေကို account တစ်ခုတည်းနဲ့ စစ်ဆေးလို့
internet ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုကနေပြီးစာပို့၊ စာယူလုပ်နိုင်တဲ့
web-based mail တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
POP3 IMAP တွေကို
ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် ISP ကနေ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ mail တွေကို mail2web ကနေ တစ်ဆင့်
100 MB ပမာဏ
သိုလှေင်ခွင့် ပေးအပ်ထားတဲ့အပြင် POP3 နဲ့ IMAP တို့ကိုပါ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
29 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:11 am
web အခြေပြု client
program တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail နဲ့ yahoo mail စတာတွေကို ပေါင်းထည့်နိုင်ပြီး
အခမဲ့ 25 MB
ပေးထားပြီး ‘သင့်နာမည် @techemail.com’ ဆိုတဲ့ handle တစ်ခုက်ို
ဖြစ်တဲ့ email အဟောင်းတွေကိုတောင်မှ ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့်ပေး ထားပြီး
ကုမ္ပဏီရဲ့ server ထဲမှာ အထူးသိမ်းဆည်းပေးထားပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ် ငါးနှစ်စတဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကြိုက်တဲ့ အချိန် ကို ရွေးချယ်ပြီး
email လိပ်စာတွေကို မသိစေလိုတဲ့ အခါမျိုးနဲ့ SMS သဘောမျိုး အလျင်အမြန်
နောင် ငါးနှစ် အတွက်
Email တွေကို ကြိုတင်ပေးပို့ ထားလို့ ရပါတယ်။
email အပို့၊ အယူတွေကို ပြုလုပ်လို့ ရသလို အခပေး user တွေ အတွက်တော့ $ 0.99
mail နဲ့ အတူ
ပါလာနိုင်တဲ့ အဖျက်အမှောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားတွေကို အဓိက နှိမ်နင်း ပေးပြီး၊
လိုသလို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
text tools တွေရဲ့ font style မျိုးစုံ ပါဝင်ထားပြီး နှေးကွေးစွာ အလုပ်
မသက်ဆိုင်သူများမသိရှိစေရန်ခြေရာ ဖျောက် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
30 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:11 am
သီးသန့်သာ ထားရှိချင်သော email တစ်ခုကို သုံးစွဲချင်တဲ့အခါ မျီုးမှာအလွန်
များ အဆမတန် forward လုပ်ဆောင်နေမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
email လိပ်စာပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ရယူခွင့်ပြုထားပါတယ်။
လိပ်စာကို အကာအကွယ်ပြုထားနိုင် ဖို့အတွက် ရှေ့မှနေပြီး အယောင်အဆောင်
spam email တွေကို
ရှောင်ရှားချုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
ထဲမှာရှိနေတဲ့ spam တွေကို လမ်းလွှဲပစ်စေနိုင်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
spam တွေကို အဓိက
နှိမ်နင်းပေးပြီး သင့်ရဲ့ email လိပ်စာအစစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုကို တစ်ရက်တာအတွက်ပဲ အသုံးပြုချင်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
လုပ်ထားခဲ့တဲ့ website တွေဆီကနေ တစ်ဆင့် ၀င်ရောက်လာတဲ့ spam တွေကို ခြေရာခံပြီး
တစ်နှစ်အတွင်း ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ email လိပ်စာငယ်လေး တစ်ခုကို လိုအပ်ရင်
sign up လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
email အယောင်ဆောင် ကြော်ငြာတွေကို သန့်စင်ပေးပြီး inbox ကို လုံခြုံစေပါတယ်။
မတရားပို့နေတတ်တဲ့ လိပ်စာတွေကို နှိမ်နင်းပြီး spam တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့အစည်းကို
31 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 11:12 am
spam တွေ ရန်ကနေ ကင်းဝေးစေဖို့
မြင့်မားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ tools တွေ ပါဝင်ထားတယ်။
32 Re: Website-Index........ [Resource] on 4th May 2009, 9:30 pm
ကို ET ကတော့ Online ပေါ်ပတ်သွားနေတဲ့သူ ထင်တယ်
အစ်ကို ပေးတဲ့ ဟာလေးတွေက တော်တော် လေ့လာစရာ စုံပါတယ်
နောက်လည်း ထပ် မျှဝေပေးပါဦး
33 Re: Website-Index........ [Resource] on 10th May 2009, 8:31 pm
[You must be registered and logged in to see this link.]ဒါကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ Comptia ရဲ့ ဆိုဒ်ပါ။
အဲဒီမှာတော့ hardware; networking နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သတင်းတွေ ........Exam အကြောင်းတွေကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..........အလည်အပတ်ပေါ့ဗျာ
34 Re: Website-Index........ [Resource] on 20th May 2009, 9:44 am
35 Re: Website-Index........ [Resource] on 24th May 2009, 6:15 am
ကောင်းတယ်ဗျာ ..... တော်တော် စုထားတာပဲ ...
36 Re: Website-Index........ [Resource] on 6th June 2009, 6:05 pm
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူကြသည့်အနက် ခွေးနဲ့ကြောင်ဟာ အများဆုံးမွေးမြူကြတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ မိမိတို့မွေးမြူထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးများကို ရှင်သန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးအောင် ပြုလုပ်လိုကြမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်ဟာ ခွေးနဲ့ကြောင်လေးများကိုမွေးမြူရာမှာ အထောက်အကူများစွာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့မွေးထားတဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင်လေးများရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို ဒီဆိုက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မိမိရဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင်လေးများကို ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးအောင် ဘယ်လိုကျွေးရမယ်၊ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပါ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ မိမိသိလိုသမျှကိုလည်း ဒီဆိုက်မှာမေးမြန်းပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
37 Re: Website-Index........ [Resource] on 6th June 2009, 6:07 pm
ဒီဆိုက်ဟာ Mobile Phone အသုံးပြုသူများအတွက် အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Phone ရဲ့ Brand အားလုံးကိုဖော်ပြပေးထားပြီး မိမိ Mobile Phone နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ game နဲ့ software application တွေကို ဒီဆိုက်မှာဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Java (J2ME), Symbian Windows Mobile, Palm, Blackberry, Flash Lite, Android, iPhone စတဲ့ operating system တွေမှသုံးနိုင်တဲ့ application တွေကို စုံလင်စွာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ Mobile Phone မှာလိုအပ်တဲ့ application တွေကို ဒီဆိုက်မှာရယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ [You must be registered and logged in to see this link.] ဟာ အထောက်အကူများစွာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆိုက်မှာ software ပေါင်းမြောက်မြားစွာအတွက် ကဏ္ဍများကိုခွဲခြားပေးထားပြီး၊ မိမိနှစ်သက်ရာ software များကို Tutorial ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Tutorial များကို လွယ်ကူစွာ လေ့လာပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် Video Tutorials ပေါင်း ၇၉,၉၃၅၀ ဖော်ပြပေးထားပြီး၊ အဲဒီအထဲမှာ ၁၄,၄၂၀၀ ကို အခမဲ့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft, Linux, Apple, Adobe,oracle,Ableton စတဲ့ကုမ္ပဏီများရဲ့ Software များကို Tutorial များပြုလုပ်ကာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆိုက်ကသင့်တော်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီ ဆိုက်လိုအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်တွေက
ကိုအခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့်
အချို့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ username နဲ့ password
38 ရုပ်ရှင်ဆိုဒ်လေးများဖြစ်ပါတယ် on 12th June 2009, 10:48 am
ရုပ်ရှင်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် Download ချယူလို့ရမယ့် ဆိုဒ်လေးတွေပါ........
ကျွန်တော်မှတ်ထားတာ နည်းပါတယ်ခင်ဗျ.......ထပ်ပြီးဖြည့်စွက် ဖော်ပြပေးကြပါဦးလို့........
39 အွန်လိုင်းမှာ စာတွေလေ့လာဖို့ on 12th June 2009, 10:50 am
40 Photoshop & Design Websites on 14th June 2009, 11:23 am
Photoshop & Design Websites
တစ်ခုတည်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တတ်ကျွမ်းထားမယ်ဆိုရင် disign အတွက်
အလုပ်မရှားလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အခု ‘fstutorials’ ဟာတခြားသော
သင်ခန်းစာတွေ မဖြစ်စလောက်ရှိပေမယ့် “text, special effect, button
drawings, colors, web graphics” စတဲ့ categories တွေကို ခွဲထုတ်ပြီး
ရှိရှိသမျှ webpage တွေနဲ့ link ချိတ်ပေးရင်း photoshop နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်လာနိုင်စေဖို့ လမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်။ ‘Sign Up’
လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် အသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ရောက်ရှိစဉ်တိုင်းမှာ
Email ကနေ အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
လိုချင်ရင် ပဲဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကို လိုချင်ရင်ပဲဖြစ်စေ
photoshop-pack မှာရှိနေပါတယ်။ သူကတော့ သူ့ရဲ့ server မှာ မသိမ်းဆည်းထားဘဲ
web ထဲကနေ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးတွေကို ကောက်နုတ်တင်ပြပေးထားတာ
register လုပ်ခွင့်ပေးထားပြီး အခမဲ့ member ပေးထားတဲ့အပြင် သင်ကိုယ်တိုင်
tutorial တွေကို ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုရင် tutorial တစ်ခုကို
တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာထိ ငွေပေးချေဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်။ Categories တွေကို
မျိုးစုံခွဲထားပြီး website တွေအတွက် template တွေ၊ layout ဒီဇိုင်း၊ icon
တွေနဲ့ login form တွေ၊ psd နဲ့ ai file တွေနဲ့ အလွန်ခေတ်မီသပ်ရပ်စွာ
တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ တချို့ကိုတော့ အခကြေးငွေနဲ့ ရောင်းချပါတယ်။
ထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး ပျော်စရာပုံကလေးတွေ
ဖန်တီးကြတာကို မြင်ဖူပါလိမ့်မယ်။ အခု website ဟာ အဲဒီလို ပျော်ရွှင်စရာ
ဓာတ်ပုံကလေးတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတွေရော၊
စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေပါ ပေးအပ်ထားတဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာတွေကို တစ်မျက်နှာချင်း ကူးယူပြီး လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်
Rating သတ်မှတ်ပေးထားပြီး photo retouch, effects, creative painting
စသဖြင့် သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ‘Anime picture’
ကဏ္ဍမှာတော့ ဂျပန် comic လေးတွေရဲ့ စစတိုင် ကာတွန်းစာမျက်နှာတွေ ကို
colorful ဖြစ်ပြီး ကြည့်ကောင်းအောင်ဘယ်လို color filling
ဟာ မဂ္ဂဇင်းလည်း ထုတ်ဝေပြီး တစ်ဖက်ကနေလည်း အခုနောက်ဆုံးပေါ်
ဗီဒီယိုကားတွေမှာ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ web ရဲ့ ‘freestuff’
ကဏ္ဍမှာ animator/ designer တွေက သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို
သင်ခန်းစာဖိုင်တွေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။ တခြားစာမျက်နှာ တွေမှာ အခြေခံအဆင့်
သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာပြီး ပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ အခုစာမျက်နှာကို
သွားရောက်ရင်း လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် photoshop အရည်အသွေး
စတဲ့ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ tutorial page တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အဓိက
ရည်ရွယ်ရင်းကတော့ design ဘက်ခြမ်းကို ဇောင်းပေးထားပြီး photoshop
တို့တင်မကဘဲ corel draw, painterx စတဲ့ ရှားပါး design တွေကိုပါ
သင်ခန်းစာဖိုင်တွေနဲ့အတူ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Homepage ကို
ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Subject ပေါင်း အမျိုးသုံးဆယ်လောက်ရှိတဲ့အထဲကမှ
ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ပြန်လည်ရွေးချယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ photoshop နဲ့ပက်သက်ပြီး
ဓာတ်ပုံ၊ ပုံရိပ်၊ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ခြင်း သင်ခန်းစာတွေကတော့
ဟာ tutorial, brustes, shapes, icons စတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ
အခန်းကဏ္ဍများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အပြင် photoshop, illustrator တို့နဲ့
ပက်သက်ပြီး ပေါ်ဦးပေါ်များ ဖိုင်အသစ်ကလေးတွေကိုပါ download link
တွေရှာဖွေပေးထားပြီး blog ဆန်ဆန် တင်ပြထားပါတယ်။ သင်ခန်းစာ အခန်းကဏ္ဍမှာ
သမားရိုးကျ logo ကလေးတစ်ခုကနေ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်အောင်
ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးအတွေးကိုပါ ပေးပါတယ်။
41 Re: Website-Index........ [Resource] on 14th June 2009, 11:24 am
နဲ့ flasheezy ဆိုပြီး webpage နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ Vecteezy ဟာ
‘illustrator’ နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဖိုင်တွေ (ai,eps) စတာတွေကို အခမဲ့
download ပေးအပ်ထားပြီး EULA လိုင်စင်ကိုတော့ သဘောတူရပါလိမ့်မယ်။ EULA မှာ
တစ်ကိုယ်ရေသုံးဖို့အတွက် ခွင့်ပြုပြီး commercial ကိုတော့ ဖြန်ချီသုံးစွဲ
ခွင့်မပြုပါဘူး။ အဲဒီဖိုင်ထဲက တစ်ချို့ကို download ရယူပြီး ကိုယ့်အတွက်
လိုအပ်တဲ့ ဖြည့်စွက်မှုတွေ ပေါင်းထည့်လို့ရနိုင်သလို
ဘယ်လိုရေးဆွဲထားတာလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုပါ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ vector ဖိုင်လေးတွေကို ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်သူ တွေအတွက်
vector image တွေကို အခမဲ့ download ပေးအပ်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ တောတောင်ရေမြေရှုခင်သဘာဝ၊ သင်္ကေတတွေ၊ သရုပ်ဖော်ပုံတွေနဲ့ icon
လှလှလေးတွေကိုပါ ရယူနိုင်တာမို့ graphic designer တွေ အတွက်ဖြစ်စေ၊
website လှလှကလေးတွေ တည်ဆောက်ချင်သူတွေအတွက်ဖြစ်စေ အသုံးဝင်ပါတယ်။
design တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး wordpress ပေါ်မှာ blog တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ
အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်တွေကို ရရှိနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ CSS,
Typography စသဖြင့် categories များစွာ ခွဲထားပြီး အလွယ်တစ်ကူနဲ့
ကြည့်ရှုနားလည်နိုင်မယ့်အပြင် download ရယူချင်သူတွေအတွက်လည်း
font တွေကို ရယူချင်သလား။ Illustrator, photoshop သင်ခန်းစာတွေကို
သိချင်သလား။ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ၊ သတင်းတွေနဲ့ Adobe pack3suite တွေရဲ့
လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို လေ့လာချင်သလား။ အနုပညာမြောက်ရေးဆွဲချက်တွေကို
နမှုနာအမြည်း ခံစားကြည့်ချင်သလား။ အရာရာအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်မယ့်
bittbox ဟာ web 2.0 ခေတ်ဦးမှာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ blog တစ်ခုဖြစ်ပြီး
ရှုမျော်ခင်းပုံကလေးတွေ နေဝင်ရီသရော ညနေချမ်းပုံကလေးတွေနဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်း၊
နွေဦးပေါက် အလှတရား စတာတွေကို ရေးခြယ်ထားတဲ့ vector wallpaper တွေကို
အခမဲ့ download ရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ HD resolution အနေနဲ့ 1024
× 768 ကနေစလို့ 1920 × 1080 အထိ download ရနိုင်တဲ့အတွက် သင့် desktop ရဲ့
wallpaper ကို ငြီးငွေ့စိတ်ပျက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အပြောင်းအလဲတစ်ခု
အနုပညာနဲ့ ပက်သက်လာရင် အကြီးဆုံး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်သင့်
တင်ထားတဲ့ topics တွေမှာ magazines ကဏ္ဍဟာ အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ vector magazine
တွေဖြစ်ပြီး free downloads ကဏ္ဍမှာတော့ EPS, ai format တွေနဲ့ vector
တွေကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မှာ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ နေရာမျိုးစုံရဲ့
vector အသင်းတွေနဲ့အတူ သင်ခန်းစာဖိုင်တွေ၊ vector ဖိုင် ဖန်တီးပုံတွေ၊
ပြိုင်ပွဲတွေကို ညွှန်ပြပေးပြီး အမျိုးစုံသော vector အလှတရားတို့
ကိန်းအောင်းခိုမှီရာ အရပ်ဌာနေတစ်ခုလို့တောင် ဆိုနိုင်မှာပါ။
ရဲ့ (.psd) extension ရှိတဲ့ file တွေ (ပုံတွေ) ဟာ designer တွေနဲ့ web
developer တွေအတွက် အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ Layer တွေကို မပျောက်မပျက်လဲ
ရရှိတဲ့အတွက် နမှုနာကြည့်ရှုလို့ရနိုင်တဲ့ tutorial image
တွေလို့တောင်ဆိ်ုနိုင်ပါတယ်။ အသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ psdfreebee ဟာ တခြားသော psd
ဖိုင်တွေကို အခမဲ့ download ပေးတဲ့ web စာမျက်နှာတွေလိုပဲ
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ psd file တွေကို စုဆောင်းထားပါတယ်။ “rapidshare”
ဒါမှမဟုတ် admin တွေ upload တင်ထားတဲ့ “hosting” တွေ ကနေ download
image တွေကို (.eps)(.ai) တွေနဲ့ upload တင်ပေးထားပြီး ရှုမငြီးဖွယ်ရာ
အကောင်းဆုံးရသတွေကို ပေးအပ်ရင် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ design
ပညာရှင်တွေဖြစ်လာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီပေးနေတဲ့ website
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Server direct ဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားဘယ်ကိုမှ
ထပ်သွာဖို့မလိုတော့ တိုက်ရိုက် download ချပြီး (.ai) file တွေကို
မှီငြမ်းပြီး ကိုယ်ပိုင် logo နဲ့ image တွေ တည်ဆောက်နိုင်ပါမယ်။
ဒီဇိုင်း၊ ဂရမ်ဖစ် ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ပက်သက်လာရင် မသိမဖြစ် သိထားရမယ့်
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “username.deviantart.com” ဆိုပြီး account
တစ်ခုကို register လုပ်ပြီး ရယူ လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့
ဒီဇိုင်းပုံတွေကို upload တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီကနေ အကြံဥာဏ်တွေ
တောင်းခံနိုင်သလို တခြားသော design တွေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုလည်း
ကြည့်ရှုခံစားရင်း နမှုနာရယူနိုင်ပါမယ်။ Image အကုန်လုံးကို အတားအဆီးမရှိ
ကြည့်ရှုချင်ရင်တော့ အခပေးဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပေမယ့် အခမဲ့ account နဲ့တင်
လုံလောက်ပြီး အမျိုးမျိုးသော ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်မှုတွေကို search box ကနေ
ဘဝနဲ့ product တွေကို ဘယ်လိုအရည်အသွေးမြင့်အောင် ဖန်တီးမလဲ။ Mobile phone
ဒီဇိုင်းသင်ခန်းစာတွေ၊ ပြင်ပမှာ လက်ရှိ Designer တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး
မေးမြန်းအကြံဥာဏ်ရယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ၊ vector pack တွေ၊ vector art
အခမဲ့ download တွေ၊ graphic design forum တွေရဲ့အကြောင်း၊
မိုးသဲကြီးမဲကြီး ရွာသွန်းနေတဲ့အချိန် တိမ်တွေရဲ့ အကြောင်းသင်ခန်းစာ
စတာတွေနဲ့ မငြီးငွေ့ မကုန်နိုင်ဖွယ် ဖန်တီးထားတဲ့ စာမျက်နှာပါ။ ‘ခင်ဗျားဟာ
ဒီဇိုင်းနာ’ လို့ တင်စားခေါ်ဆိုထားပါတယ်။
လိုပဲ design communit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Register လုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းကတော့
deviantart မှာ မရနိုင်တဲ့ သတင်းအသစ်တွေနဲ့ designer တွေရဲ့
နည်းပညာဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို blog စတိုင် ရရှိခံစားနိုင်လို့
ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းသန့်ပြီး စမတ်ကျတဲ့ အပြင် အဆင်ကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်
သင့်ရဲ့ homepage ကို gomedia ပုံစံအတိုင်းလိုချင်ဆန္ဒတွေ ပေါ်ပေါက်လာမှာ
မလွဲပါဘူး။ အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာ၊ logo icon တွေနဲ့
တခြားအသုံးဝင်နိုင်တာတွေကိုပါ “freebies” subject မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
ရဲ့ pattern တွေ၊ illustrator ရဲ့ eps တွေနဲ့ တခြားသော download
ရယူနိုင်တဲ့ vector ပေါင်း မြောက်မြားစွာ တည်ရှိနေပါတယ်။ Category
တစ်ခုချင်းအလိုက် လိုအပ်တဲ့ (.eps)(.ai) file တွေ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Pattern shapes တွေ အတော်ကို စုံလင်ပါတယ်။
ရဲ့ psd file တွေကို အချင်းချင်းမျှဝေကြရင်း designer တွေ အချင်းချင်း
ဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့ ဖန်တီးပေးထာတဲ့ စာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်ပေါက်လာတာ
မကြာသေးပေးမယ့် ရှားပါးပြီး ခက်ခဲတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကြောင့်ရော၊
အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ psd တွေကြောင့်ရော webpage ရဲ့
42 Re: Website-Index........ [Resource] on 26th July 2009, 10:16 am
မြန်မာ video ကားများ၊နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကားများနှင
download ချခွင့်လည်းပေးထားတဲ့ Site လေးပါခင်ဗျား။
Last edited by Хакер-истребитель on 17th January 2010, 5:46 pm; edited 1 time in total
43 ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုပြင်ကြည့်ရအောင်... on 27th October 2009, 1:03 pm
ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုပြင်ကြည့်ရအောင်...
44 အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ ဗီဒယိုနဲ့ စာသင်စို့ on 17th January 2010, 6:53 am
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါ စာသင်ခန်းပုံစံထက် ဗီဒယိုကြည့်ရင်း သီချင်းလိုက်ဆိုရ်း အပန်းလည်းပြေ အကျိုးလည်းရှိပါလိမ့်မည်.
သည်ဆိုက်မှာ စီးပွားရေး ဂီတ၊ အားကစား နည်းပညာနဲ့ ဗီဒယိ်ုဂိမ်းစတဲ့ ဇာတ်ကားတိုပေါင်းများစွာရှိတယ် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကဏ္ဍကို ရွေးချယ်နိုင်သလို အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်အလိုက် အလွယ်အခကါ ခွဲထားနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ
အရင် ရီဂျစ်စတာလုပ်ရပါမယ် ပြီးရင် ဗီဒယ်ုထဲက အသံအတိုင်း မိုက်ခရိူဖုးန်နဲ့ လေ့ကျငိ့နိုင်ပါတယ်
သင်ရဲ့ တိူးတက်မှုကို ၀က်ဆိုက်က မှတ်သားထားပါတယ်
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရင်း ပျော်ရွင် မှုကို
45 အီးမေလိနဲ့ မပြေလည်ရင် on 17th January 2010, 7:05 am
အရွယ်ကြီးမားတဲ့ ဓါတ်ပူံတွေ၊ ဗီဒယိုတွေကို ပို့ဖို့ဆိုရင် အီးမေလ်းကို အားကိုးလို့ မဖြစ်ပါဘူး
သီချင်းဆယ်ပုဒ်လောက်၊ တစ်ပြိုင်တည်းပှိုလှိုရတဲ့ ဆိုက်က
သည်ဆိုက်မှာ သင့်အီးမေလ်းနဲ့ လက်ခံမဲ့သူရဲ့ အီးမေလ်းကို ထည့်ပါ
ဖိုင်ကို Upload လုပ်တာမြန်ဆန်ပြီး Link တွေ ပိှု့ပေးစရာမလိုပါဘူး ဖိုင်ကို စကားဝှက်ခံထားလို့ရတယ်
လက်ခံသူက လက်ခံပြီးပြီးချင်း ဖိုင်ကို ဖျက်မယ်ဆိုပြီး ညွန်ကြားထားလို့ရပါတယ်.ရီဂျစ်စတာ လုပ်စရာမလိုပါဘူး
ဖိုင်ပို့ရင်း အီးမေလ်းပါ တွဲပို့လို့ရတယ်
46 ၀င်းဒိူးဒရိုင်ဘာများ on 17th January 2010, 7:26 am
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွေအလုပ်လုပ်ဖို့ ဒရိုင်ဆော့ဝဲဟာ မရ်ှမဖြစ်လ်ူအပ်ပါတယ်။
မူရင်းစီဒီပျောက်သွားရင် ၊ အလွယ်တကူရှာမတွေ့ရင် ဘယ်မှာသွားရှာမလဲ။.။။
မှာ ၀င်းဒိူးဒရိုင်ဘာများစွာရှိပါတယ် ဒရိုင်ဘာတွေကို ဘလူးတုစ်က အစ မော်နီတာ ပရင်တာ အလယ်၊ ဗီဒယိုကတ်အဆုံးပစ္စည်းအမျိုးအစားလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်
ဒရိုင်ဘာတင်မက သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်( User manual)တွေကို ပါ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒရိုင်ဗာ သုံးသောင်းကျော်၊ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ပေါင်းနှစ်သောင်းကျော်တွေ့ရမဲ့ ဆိုက်ပါ
ဒရိုင်ဗာတွေကို အစုံလင်ဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပေးထားပေမဲ့
လုံးဝရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် လည်း ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို တောင်းဆိုထားနိုင်ပါတယ်
47 မေ့လောက်မှ ရောက်လာမယ် on 17th January 2010, 7:32 am
အခုပို့လိုက်တဲ့ စာကို နောက်ငါးနှစ်မှ ရောက်စေချင်ရင်
သည်ဆိုက်မှာ လက်ခံသူရဲ့ အီးမေလိးလိပ်စာထည့်ပါ
မန်ဘာဝင်စရာမလိုပဲ အခမဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်
ကိုယ့်ကိုကိုပဲ ပြန်ပို့ပို့ သူတစ်ပါးကိုပဲ ပို့ပို့ မေ့လောက်မှ ရောက်လာမဲ့ အီးမေလ်းပါပဲ။
48 Re: Website-Index........ [Resource] on 17th January 2010, 9:28 am
ET wrote: အခုပို့လိုက်တဲ့ စာကို နောက်ငါးနှစ်မှ ရောက်စေချင်ရင်
မဆိုးဘူးဗျ။ ခေတ်သစ် သေတမ်းစာ အနေနဲ့ သိမ်းထားလို့ရမယ်။ (လတ်တလော ပေါ်လာတဲ့ အကြံ) ဟိဟိ
49 Re: Website-Index........ [Resource] on 26th January 2010, 4:46 pm
ကျနော်လည်းလုပ်လိုက်ဦးမယ်... :exercise အခုပေးမှာက အင်တာနက်ကနေ ebook တွေရှာဖွေချင်ရင် ဒီကိုသွားပါလို့..... :doit
50 Re: Website-Index........ [Resource] on 26th January 2010, 4:47 pm
51 Re: Website-Index........ [Resource]